Clogher Corner Manandratra Ny Feo Kambojiana Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2015 8:26 GMT
Fankasitrahana ireo mpandray anjara tamin'ny tetikasa miaraka amin'i Sopheap Chak, Tale mpanatanteraka ao amin'ny CCHR. Sary avy amin'ny CCHR.
Taorian'ny enimbolana, tonga tamin'ny tanjona famaranana ny Clogher Corner tamin'ny Novambra 2014, hetsika izay natrehin'ireo bilaogera sy mpisera media sosialy maherin'ny efapolo ny Tetikasa Empowering Cloghers. Iray amin'ireo fihaonana goavana indrindra eo amin'ireo bilaogera ity satria matetika izahay amin'ny aterineto ihany no mifandray fa tsy mihaona mivantana ao amin'ny vondrona lehibe. Fomba tsara hanentanana Cloghers vaovao mba hanohy hibilaogy ity fahafahana mahita olona maro isan-karazany amin'ny tontolon'ny blaogy ity.
Tsy ny fampihaonana ireo bilaogera sy mpisera media sosialy ihany no tanjon'ny Clogher Corner fa ny hampahafantatra Cloghers vaovao izay vao avy nahavita fanofanana ary manomboka mibilaogy hoan'ny fiarahamonina ihany koa. Fanampin'izany, nokarakaraina ity hetsika ho fankasitrahana ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana bilaogy izay nokarakaina teo amin'ireo mpandray anjara tamin'ny tetikasa mba hitsapana ny fahaizan'izy ireo mibilaogy sy hanombanana ny fiantraikan'ny fanofanana.
Talohan'ny Clogher Corner, nivory ny vondrona mpikambana telo ao anaty komity ary nanombana ireo lahatsoratra bilaogy izay nalefa tao amin'ny fifaninanana bilaogy. Nangonina avokoa ireo fanehoan-kevitra rehetra ary nalefa tany amin'ireo mpifaninana alohan'ny fisokafan'ny Clogher Corner.
Afaka niarahaba ireo telo mendrika tamin'ny fifaninanana ireo mpandray anjara. Lasan-dRamatoa Sum Dany ny laharana voalohany, noho ny lahatsoratra bilaoginy mitantara ny zava-misy eo amin'ireo mpiasa amin'ny ozinina. Ramatoa Chroeng Sopheakvirya kosa nibata ny laharana faharoa noho ny lahatsoratra bilaoginy momba ny fampianarana sy ny ankizy ary lasan-dRamatoa Sheng Sreymom ny laharana fahatelo noho lahatsoratra bilaoginy momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ankoatra izay, niarahaba an'i Sum Dany, nahazo ny laharana voalohany noho izy voafantina ho iray amin'ireo mendrika tamin'ny VXW, mampitsahatra ny Herisetra mihatra amin'ny vehivavy amin'ny alalan'ny zava-baovao amin'ny Teknolojia finday nokarakarain'ny Fikambanana The Asia Foundation izay niara-niasa tamin'ny Golden Gekko sy ny Sabay Digital Corporation ny Foibe Kambodziana misahana ny Zon'Olombelona (CCHR).
Mpanatrika ny Clogher Corner. Sary avy amin'ny CCHR.
Nofaranan'ny Clogher Corner ny tetikasa naharitra 6 volana izay nahafahana nampahery sy nanentanana ireo vehivavy avy any ambanivohitra mba haneho ny hevitr'izy ireo ao anatin'ny toerana azo antoka sy midadasika kokoa. Nanentana ireo mpandray anjara izay nahavita ny fiofanana rehetra nomen'ny Tetikasa ihany ny Clogher Corner mba hanohizan'izy ireo ny bilaogy ary hiara-dalana amin'ireo bilaogera hafa.
Efa lasa malaza ny fibilaogina ao Kambodza, na dia izany aza ny ny ankamaroan'ireo bilaogy dia tsy nifantoka tamin'ny olana ara-tsosialy na olana heverina fa tena saro-pady, izay mety hampidi-doza ny mpanoratra. Na izany aza, sehatra mora ampiasaina sy tena ilain'ny Kambojiana ny bilaogy mba hanehoan'izy ireo hevitra mikasika ny olana izay manahirana azy ireo, ary tena zava-dehibe izany satria voafetra be loatra ny fampahalalam-baovao mahazatra ao Kambodza.
Ny lafiny lehibe indrindra amin'ny tetikasa dia na dia nisy aza ireo zava-tsarotra sasany sy ireo mpandray anjara niala an-daharana nandritra ny fotoanan'ny tetikasa, nisy kosa ireo mpandray anjara izay mbola vonona hanohy hamoaka lahatsoratra blaogy.
Raha te-hijery sary maromaro momba ny Clogher Corner, tsidiho ny Rakitsary Facebook CCHR.